Apple Watch - ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Farany rehefa afaka roa halavana hatramin'nytaona feno tsaho ary ny tombantombana momba ny mety ho Apple iWatch, tao amin'ny Keynote farany tamin'ny talata 9 septambra 2014 Apple dia nanolotra antsika ny azy fanaraha-maso hendry. Ity famantaranandro ity izay noheverinay fa hatao hoe iWatch noho ireo patanty maro ananan'i Apple amin'ity anarana ity, ary nantsoina hoe e Apple Watch maina.
Ny tale jeneralin'ny orinasa, Tim Cook, dia nanolotra izany tamin'ny Keynote tamin'ny 9 septambra 2014 taorian'ny fehezan-teny angano izay nampalaza azy tamin'ny orinasa ihany rehefa nilaza azy tao amin'ny «Zavatra iray hafa ...» Ity zavatra iray More ity no voalohany nataon'i Tim Cook tamin'ny tantarany tamin'ny naha CEO an'ny Apple azy ary tsy nitsahatra namporisika ireo vahoaka miandry azy hihaino indray ny zavatra tian'izy ireo be.
Modely Apple Watch 3
Apple dia manolotra an'ity Watch vaovao ity hahafaly ny besinimaro ary natomboka izy maodely telo samy hafa sy habe roataona samy hafa ho an'ny tanan-tànana lahy sy vavy. Modely iray an'ny vy, maodely fanatanjahan-tena an'ny aluminium ary antso hafa Edition de Volamena karat 18.
Amin'izany fomba izany, apetrak'i Apple ny fiheverana sy ny tsaho amin'ny alàlan'ny fanolorana ilay antsoina hoe namana tonga lafatra ho an'ny fitaovanao iOS ary indrindra ny iPhone.
Amin'ny I am from Mac dia ho hitanao ny fampahalalana rehetra amin'ny voalohany amin'ny akanjo entin'ny orinasan'ny paoma manaikitra hatramin'ny andro voalohany nanombohany. Ankafizo ny Apple Watch ary miaraka aminay ny vaovaonao rehetra.
ny Tony Cortes hace 1 andro .
Hojerentsika raha ity no farany. Efa nilaza izahay isaky ny mamoaka fanavaozana watchOS vaovao i Apple ...
ny Jordi Gimenez hace Herinandro 2 .
Tonga sy mandeha ny tsaho rehefa mitsoka ny rivotra ary ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia mihoatra noho izay azo atao ankehitriny ...
Fanambarana momba ny fiantraikan'ny Apple Watch
ny Jordi Gimenez hace Herinandro 3 .
Indraindray ny antso amin'ny sampana vonjy maika amin'ny fotoana mety dia afaka mamonjy ny aintsika ary izany no ...
Olana fiampangana amin'ny Apple Watch sy watchOS 8.3
ny Ignatius Room hace 1 volana .
Ny sasany amin'ireo mpampiasa Apple Watch Series 7 dia miatrika olana momba ny famandrihana rehefa avy nanavao ny fanavaozana taorian'ny fanavaozana azy ...
Ataovy manokana ny Apple Watch miaraka amin'ireto sary X-ray ireto
Tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra, ny bandy avy amin'ny iFixit dia nizara ny famakafakana nentim-paharazana momba ny Apple Watch Series 7 vaovao disassemble tamin'ny ...
ny Tony Cortes hace 1 volana .
Raha ampiana ny fahamoram-panahin'ny sasany amin'ny fitoriana ny orinasa lehibe noho ny fialan-tsiny hahazoana tombony, ...
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe amin'ny dikan-tsarimihetsika vaovao amin'ny watchOS 8.3 Release Candidate dia ny manampy ny asa AssistiveTouch ...
Ny iray amin'ireo tsaho ao an-tsainay amin'ny faminaniana farany nataon'i Mark Gurman dia ny orinasa Cupertino ...
ny Tony Cortes hace 2 volana .
Nahaliana ahy foana ny famantaranandro marika Casio. Satria nanana ny voalohany tamin'ny kajy aho, tamin'ny androko ...
ny Manuel Alonso hace 2 volana .
Ny fomba hitan'i Apple hanentanana anao handeha tsara dia antsoina hoe "Fotoana handehanana." Fitness + ...
Fantatrao ve fa misy boky iray ahafahanao mahita ny fiasan'ny tsirairay amin'ireo sehatra misy anao ...